Badan oo ku saabsan Windows 10 Wax ka baro 5 isjiidka
Qaybta 1. Windows 10 eegis ugu horeysay gaar ah
Qaybta 2. Windows 10 trailer dhisay 2015
Qaybta 3. Windows 10 hologram trailer
Qaybta 4. Madaxweyne Siilaanyo Oo mid Windows 10 trailer
Qaybta 5. Windows 10 trailer Microsoft ee aduunka
YouTube waa website wayn oo martigelisey in tobanaan kun oo videos online. Waxaa sidoo kale in la xuso in dadka isticmaala ay arrintan la xiriira ka heli kartaa tutorial kasta IT ka duurka kasta oo kale oo marka ay timaado Windows 10 ka dibna la sii daayo dambeeyay ee Microsoft ayaa xaqiijisay in user helo natiijada ugu fiican oo sidaas daraaddeed ayay u dhiirri- shaqaalaha iyo sidoo kale guud ahaan dadweynaha si loo hubiyo in content ee ku saabsan this uploaded in website-ka si user helo ugu wanaagsan ee reer macluumaadka ayaa la siiyey. Sidoo kale waa xaqiiqda dhalashada ah in daawashada tutorial halkii ay u hir erayada fog tahay inta badan ka sahlan u user iyo sidoo kale waa in la ogaadaa in user waa in la hubiyo in ugu fiicnaa ee uu dhiibay inay OS ee la xiriira samaynta iyo nidaamka ku meel si aad u hubiso in user helo natiijada faa'iido aan wax arrintan iyo dhibaato.
Ay caanka ah canbaha ee YouTube ayaa xaqiijiyey in user helo ugu fiican iyo kan gobolka ee natiijada farshaxanka ee la xiriirta goodhiyaha la uploaded. Laga soo bilaabo Windows XP ilaa daaqadaha 10 OS kasta oo kasta oo la bilaabay shirkad uu leeyahay dhamaystiran Casharrada iyo goodhiyaha in uu xaqiijiyey in taageero macaamiisha shirkadda ayaa sidoo kale qaadataa sheeko la mid ah gargaarka sida inta badan isticmaala heli arrimaha iyagaa ayaa is xalila mar YouTube ee daaqadaha wax arrintan la xidhiidha ayaa browsed. Waxaa sidoo kale in la xuso in ay jiraan wax ka badan hal xal marka ay timaado wax daaqadaha la xidhiidha arin gaar ah oo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in mararka qaarkood waxa uu noqonayaa mid ku adag tahay user si loo hubiyo in wixii waa in lagu dabaqo. Kala duwanaanta Tani waa wax uu ugu baaqay in ay geliyaan Microsoft ee isjiidka ah Windows 10 website-ka iyo marka laga reebo shirkadda dad kale oo badan ayaa sidoo kale uploaded isjiidka ah oo ay jiraan wax badan uga barato marka ay timaado in hirgelinta xalka. Qaybta xigta ee tutorial inay hubiyaan in user helo Casharrada ugu fiican in ay yihiin uploaded in YouTube ee ay la socdaan link iyo shaashadda webpage ku haboon in la sameeyo hubin doona wakhti aan la gaboobeen, iyo user si toos ah u helay in uu kulan arrinta sida ugu dhaqsaha badan tutorial tani waxaa la sahamiyey.
Eli Yooxanaa Gallery
In kastoo tutorial tani ma aha in dheer badan laakiin daaqadaha 10 ayaa laga hubsanayo in buuxa si ay u hubiyaan in user helo ugu fiican iyo gobolka go'aanka tahay samaynta in haddii OS aan laga bixi ama. Muuqaalada ayaa waxaa lagu sharaxay si faahfaahsan iyo user wuxuu sidoo kale hubin karaa in uu bilaabo shaashad buuxda app soo bandhigo si ay u bilaabaan menu sahaminta style video uploaded waa weyn yahay oo waa ugu fiican ee wax user si ay u go'aamiyaan in haddii OS waa in loo arkaa download ugu fiican marka loo eego version hore sida Windows 7 iyo Windows 8 gaar ahaan. Sidaas daraaddeed user waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in trailer la daawaday si ay u helaan ugu wanaagsan ee reer OS daaqadaha in la bilaabay dhamaadkii July 2015.
Sidoo kale waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka trailer farshaxanka ayaa xaqiijiyey in user helo ugu wanaagsan ee reer daaqadaha 10 iyo codsiga ah ee habkan ma aha sidoo kale heshiis weyn oo dhan. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in trailer la daawaday ilaa dhamaadka sida warbixin qiimo leh ayaa la siiyey by user ayaa uploaded trailer dhigi. Waxaa by fog trailer ugu wax soo saarka kuwa isticmaala oo dhan, kuwaas oo raadinaya in ay sida ugu fiican oo gobolka ka mid ah bandhig farshaxan daaqadaha ka. The dhinacyada OS cusub yihiin sahamiyey ee buuxa iyo user wuxuu heli doona falanqayn inkasta oo iska xanaajin si loo hubiyo in nidaamka la casriyeeyay oo version Falanqeynta la soo bixi ku biiro barnaamijka ka tirsan daaqadaha.
Contana ayaa ah in la soo gundhig gudahood daaqadaha 10 ayaa laga hubsanayo in buuxa si ay u hubiyaan in user helo ugu wanaagsan ee reer feature cusub. Waa in la ogaadaa in user ayaa xaqiijiyey in waafaqid ee daaqadaha la horumarinta farsamada ee hadda jira iyo deegaanka aynu ku nool yihiin ayaa waxaa sidoo kale sharxay habka ugu fiican. The meelaha OS this hubiso in natiijada ugu wanaagsan waa la damaanad qaaday ka dhigi doonaa ayaa sidoo kale dib u eegay hab dhiman kuwa kale si ay u soo baxdo iyo rakibi ama cusboonaynta ka OS hadda daaqadaha 10 oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Trailer Tani waa mid ka kaliya ee ku jira liiska uu xaqiijiyey in marka la barbardhigo la horumarinta farsamada hadda lagu sameeyaa habka ugu wanaagsan.
Warbaahinta ciyaaraha HQ
Sida magaca trailer ayaa muujinaya arrin ciyaaraha daaqadaha ayaa laga hubsanayo in buuxa sidaas darteed waa in la ogaadaa in user waa in la hubiyo in trailer waxaa soo maray si loo hubiyo in waxqabadka gming ee OS la iigu xukumaa sameeyo ka hor inta go'aan laga gaarayo in la gaarsiiyo. Waa video ugu fiican taas oo ka dhigaysa hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah waayo-aragnimo ciyaaraha farshaxanka. Uploader ee video ah ayaa xaqiijiyey in kulan u ciyaaray waa la nool inuu u muujiyo shaqeynta ee OS ayaa si faahfaahsan u weyn,
Waa trailer ah in ka tagayo user iska aamusay oo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in waxa laga daawan waa in la hubiyo in wixii isbedel ah in la hor keeni doono marka OS tan la geliyo si gudahood deegaanka farsamada ee user a nidaamka sida ay leedahay hababka ugu fiican oo ugu horumarsan sharaxay iyo sidoo kale waa in la ogaadaa in tani ay tahay trailer ka lengthiest in liiska uu soo sheegnay in tutorial this.
Solutions Free in kaabta iyo Soo Celinta Windows Phone
Windows XP ka ilaaliyaa Rebooting [xalin]
Download Windows DVD Kan sameeyey Alternative for Free
> Resource > Windows > Baro wax badan oo ku saabsan Windows 10 5 isjiidka